သူ့ရဲ့အံသြဖွယ် မိတ်ကပ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ 10နှစ်အရွယ်ကောင်လေး » Today Bago
HomeLifestyleEntertainmentသူ့ရဲ့အံသြဖွယ် မိတ်ကပ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ 10နှစ်အရွယ်ကောင်လေး သူ့ရဲ့အံသြဖွယ် မိတ်ကပ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ 10နှစ်အရွယ်ကောင်လေး May 29, 20170comments Nandar Lwin Posted in Entertainment0သူက UK နိုင်ငံမှ ၁၀နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးဖြစ်ပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်တာကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူအများစိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို 57သန်းကျော် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး မှတ်ချက်များပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သူ့ရဲ့အံသြဖွယ် မိတ်ကပ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ 10နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
သူ့ရဲ့အံသွဖှယျ မိတျကပျကြှမျးကငျြမှုကွောငျ့ အငျတာနကျမှာ နာမညျကွီးလာတဲ့ 10နှဈအရှယျကောငျလေး
သူက UKနိုငျငံမှ ၁၀နှဈအရှယျကောငျးလေးဖွဈပွီး မိတျကပျလိမျးတဲ့နရောမှာ ကြှမျးကငျြတာကွောငျ့ အငျတာနကျပျေါမှာ လူအမြားစိတျဝငျစားခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ အဆိုပါဗီဒီယိုကို 57သနျးကြျော ၀ငျရောကျကွညျ့ရှု့ခဲ့ပွီး မှတျခကျြမြားပေးခဲ့ကွပါတယျ။
Related Posts0comments Entertainment ပလတ်စတစ်ဘူးနဲ့ အမိုက်စား ပန်ကာတစ်ခု လုပ်ကြည့်ရအောင်
0 comments Entertainment ကျွန်တော်တို့ ရှောင်သင့်တဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ် အမှား (၇)ခု
0 comments Entertainment ကျွန်တော်တို့ ရှောင်သင့်တဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်အမှား (၇)ခု
ရေအောက်ကမ္ဘာ အလှတရားတွေကို ရိုက်ကူပေးနိုင်မဲ့ ငါးပု...	May 29, 2017	0 comments ဆပ်ပြာတစ်မျိုးတည်းသုံးစွဲပြီး အသားအရေဖြူဖွေးလာသည့်...	May 29, 2017	0 comments Share this 33SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr
0 comments Entertainment ဘယ်သူမဆို ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Handmade လက်စွပ်ပြုလုပ်နည်း
Do not miss0comments Entertainment ပလတ်စတစ်ဘူးနဲ့ အမိုက်စား ပန်ကာတစ်ခု လုပ်ကြည့်ရအောင်
Copyright © 2015 Myanmar Today Bago Allow responsivity Gotahot tip? Send it to us!	Your Name (required)